ZITHATHELE Saab J37 Viggen FSX & P3D - Rikoooo
Saab J37 Viggen FSX & P3D Inguqulo 2
Play 14 270
Umbhali: Virtavia / Alphasim FSX P3D updates ngu-Henk Schuitemaker http://www.virtavia.com
Auto-Isifaki olusha ukuze version 10 - Engeza-on olusha ukuze version 2, ngokugcwele bomdabu FSX & P3D v1 v2 v3
Lokhu iphakethe kwaba payware ex saab Viggen J37 of Virtavia / Alphasim isiyatholakala njengoba freeware. Izinguquko sekwenziwe ku aircraft.cfg kanye panel 2D / VC ukuba babe iyahambisana FSX / P3D. tinkhulumo Eziningana afakiwe ahlomile futhi kungahlonyiwe.
I-Saab 37 Viggen (Thunder) iyinhlangano ndiza multirole elaklanywa futhi lakhiwa Sweden in the 1960s. It libhekene iphiko delta, lo canards, kanye reverser iphuzu for lihlala iDemo.
Saab J37 Viggen FSX & P3D Inguqulo 2 Thwebula
Incazelo 41 177
Incazelo 3 608
Incazelo 26 508
Incazelo 35 594
Incazelo 9 514
Incazelo 13 801
Incazelo 9 319
Incazelo 41 680